Akuko - Ihe omuma ihe ndi ozo
itinye n'ọkwa nri
Ushdị bọtịnụ Push
Skin aka nlereanya
infrared osi ite
Multi burners osi ite
Ugboro abụọ burner
igwe eji esi mmiri batrị
Ọhụrụ nri ngwaahịa
Ndị ọzọ na-emepụta
Itinye n'ọkwa cooktop FAQ
Infrared cooktop Ajụjụ
Ihe omuma ihe ndi ozo
Na kichin, onye na-esi nri bụ otu n'ime ngwa efere kichin nke a na-ahụkarị. lee anya nke ọma!
Dabere na ike nke onye na-esi nri ọkụ ọkụ, enwere ike kewaa ya n'ime igwe na-eme nri na onye na-ere ihe ọkụkụ na ahịa azụmaahịa.Dị ka nhazi ọkwa nke isi ọkụ, a ga-ekewa onye na-esi nri ọkụ ọkụ n'ime otu osi nri, okpukpu abụọ, ọtụtụ osi nri na otu ọkụ eletrik otu gas.
Dabere na ike nke ọkụ ọkụ ọkụ nwere ike ịkewa n'ime igwe na-ere ihe ọkụkụ na igwe na-ere ihe ọkụkụ.
Na-alụbeghị di osi ite
Voltage ọrụ nke otu osi nri bụ 120V-280V, nke a na-ahụkarị bụ 1900W-2200W, nke a na-ejikarị eme nri ezinụlọ.Ọ malitere n'oge ma jiri ya mee ihe na mba anyị.
Ugboro abụọ osi ite
Voltage ọrụ nke okpukpu abụọ nke isi bụkwa 120V-280V. Ka ọ dị ugbu a, enwere ụlọ obibi na otu concave na abụọ dị larịị na ahịa ụlọ. Otu isi ogbe esi nri niile bụ 2100W, igwe eji esi nri ugboro abụọ arụghị ọrụ karịa 3500W.
Multi osi nri
Multi cooker, n'ozuzu maka onye na-esi nri abuo tinyere onye na-esi nri infrared. Oge ndị metụtara ya: ebe ọ bụla a na-eji stovu ọdịnala, dịka ụlọ ọgwụ, ụlọ ọrụ na ebe a na-egwupụta akụ, họtel, ụlọ nri, kọleji na mahadum, ụlọ ọrụ, wdg; Karịsịa dabara maka oge ahụ n’enweghị mmanu ma ọ bụ na ejiri mmanụ agbachi, dị ka okpuru ulo, ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ ala, ụgbọ mmiri, ụgbọelu na mmepe China ndị ọzọ, ọkachasị mmepe ngwa ngwa nke ike eletrik, a ga-eji ihe eji esi nri ọkụ a na-enye ọkụ.
Otu ọkụ eletrik otu gas
Otu ọkụ eletrik otu gas bụ ngwakọta nke ihe eji esi nri na ngwaahịa mmanụ ọkụ, isi ọkụ nwere ike iji gas ọdịnala, isi ọkụ ọzọ na-eji ihe eji eme ihe ọkụkụ, ike izugbe 2100W, bụ afọ abụọ na-apụta ngwaahịa.
Post oge: Nov-19-2020
Thlọ 6, Nkeji 3, Buildinglọ 6, Gaozaifuyuan, Xingtan Town, Obodo Shunde, Foshan City, China
Ihe dị iche n'etiti etiti ihe ọkụkụ ...
Itinye ihe eji esi nri nri
Inlọ ọrụ mepụtara
Copyright - 2010-2023: All Rights echekwabara.